Raha niainga tamin’ny fanangonana sakafo tsotsotra teny amin’ny hotely lehibe mantsy ilay tetikasa teo aloha, dia efa mahavatsy sakafo ho an’ireo akany sy toerana fitaizana ankizy kamboty eto amintsika ankehitriny. Ho an’ny taona 2018 manokana, dia toeram-panabeazana ankizy kamboty miisa 15 eto an-drenivohitra no nahazo tombony tamin’ny Foodwise. Sakafo tsy lany milanja 17 taonina no tsy verivery foana ary zaza kamboty mahatratra 2 000 isa no nisitraka izany. Ankehitriny dia navadika ho Foodwise ny “Manzer Partazer”. Orinasa maro be mpivarotra sakafo, tsena lehibe, na ihany koa hotely lehibe eto amintsika no manolotra izay sakafo tsy lany ao amin’izy ireo ary atolotra ho an’ireo akany misy ankizy sahirana eto amintsika. Anisan’izany ny Akany Avoko, toeram-panabeazana zazavavy ao Ambohidratrimo. Nambaran’ny talen’ity Akany ity, fa efa hatramin’ny taona 2016, ireo zazavavy miisa 154 beazina ao amin’ny Avoko no nisitraka ireo sakafo ireo. Sakafo tsy mora simba no azon’izy ireo isam-bolana ary misy ataon’izy ireo famatsiana mandritra ny fotoana maharitra izany. Ny orinasa DHL eto Madagasikara ihany koa dia manohana ny Foodwise. Nanolo-tena hisahana ny fitaterana ireo sakafo voaangona mankany amin’ireo akany misitraka izany ity orinasa lehibe ity. Manao tohivakana ny fifanampiana hoy ny Tale Jeneralin’ny DHL omaly, ka raisin’izy ireo an-tanana ary ampidirin’izy ireo ao anatin’ny fanaterana entana ataony mahazatra ny fanaterana ireo sakafon’ny ankizy miainga avy any amin’ireo mpanome, mankany amin’ireo akany misitraka ireo sakafo.